Weebụsaịtị Were II
New weebụsaịtị, Were II
Wednesday, October 27, 2010 Saturday, October 18, 2014 Nick carter
Enwere m mkparịta ụka dị ukwuu n'ụtụtụ a Jeb site na obere igbe. (Nke ahụ bụ eziokwu, amaara m ya. Ọ bụrụ na ị maghị onye Jeb, kedụ ebe ị gara?) Cheta n'eziokwu na m na-enye iwu na-agba mgba ugboro abụọ, na enweghị m ike ijide aka m ugbu a, Ekwenyesiri m ike na ihe ọ gwara m gaara adị oke omimi na-enweghị caffeine.
“Ya mere, olee ndị gị lekwasịrị ahịa?” Ajụrụ m, na-atụ anya ịnụ banyere ụlọ ọrụ, nha, na ndị nkọwa niche ndị ọzọ.
"Anyị bụ ndị a ụlọ ọrụ nke abụọ website." Jeb gwara m. Ha aghaghị ịgafe usoro a ọ dịkarịa ala otu oge gara aga. ”
Nke abụọ? Ọ chọrọ ịgbaso ọdụ uwe mkpuchi nke ndị ọzọ? Ka obu obi siri ya ike na ya ga eme nke oma, o choro ihie ya. Ma. Ọ na-enwe mmasị ịrụ ọrụ na onye na-azụ ahịa smart. Onye ahịa nke maara ihe ha chọrọ, ihe kpatara ha ji chọọ ya, na ihe na-emeghị (ma rụọ ọrụ ebube) rụrụ ọrụ na nke mbụ.
Nke mbu, oburu n’inweghi webusaiti, tufuo ya elu. Ikike Jeb. Nwere ike iji ọtụtụ afọ tụgharịa uche maka ọdịnaya gị, imewe, usoro ihe omume, isi ihe ntụgharị, wdg. Nke ahụ ga-aza. Ọ ga - eme otu ihe dị egwu maka ọmụmụ ihe maka ụmụ akwụkwọ kọleji. Mana mgbe ọnwa atọ gachara, ị ga-achọpụta na ihe ị kwuru adabaghị. Ugbu a, ị nwere ike ịbụ ụzọ na-ezighi ezi, ma ọ bụ ị nwere ike ịbụ obere mmejọ. Ma ị naghị emehie.
Echegbula. Ihie ụzọ bụ ụzọ kachasị mfe iji bụrụ onye ziri ezi. Ọbụna ọkachamara na-arụpụta ihe, Robby Sla Sla, na-agba ndị mmadụ ume ka ha ghara ịda mba. N’ebe Jeb nọ, ozugbo ị mejọrọ – ọbụlagodi ezighi ezi – ugbu a ọ nwere ike isoro gị rụọ ọrụ. Ugbu a ọ ga - enyere gị aka ma tinye ike nke ụlọ ọrụ ya iji nyere gị aka.
Ugbu a, ka anyị kwuo na ị nweela weebụsaịtị. Ọ na-arụ ọrụ? O na aru oru otu ichoro? Gini mere ị gaghị emeghachi ya?
Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-emeso weebụsaịtị dị ka ha si mesoo nkwekọrịta ahịa na ụbọchị tupu ụbọchị mbipụta dijitalụ. Mee ka ọ bụrụ nke zuru oke na mbụ, n'ihi na ọ na-efu nnukwu ihe iji nweta "agba" nke na ịchọrọ ịgba ọsọ 10k ma ọ bụ karịa n'ime iberibe ndị a iji mee ka ego a kwụọ. Ma otu oge, ozugbo ebipụtara ya, ekwula okwu banyere ịgbanwe ya ma ọ dịkarịa ala otu afọ ma ọ bụ karịa. Chefuo nke ahu. Ebe nrụọrụ weebụ bụ ihe mkpofu n'efu ma weghachite. Ọfọn, ọ bụghị n'efu. Mana teknụzụ na - eme ka ọ dị mfe idobe ngwa ahịa azụmaahịa a na beta mgbe niile, na - atụghị egwu ịmeghachi ya.
Enweghị ike dochie ahụmịhe mmụta nke ịmalite weebụsaịtị mbụ gị. Ma, ọ bụ maka nke a bụ ezigbo ihe kpatara na ebe nrụọrụ weebụ gị, were II, ga-abụ saịtị ahụ na-eme ihe dị iche. Were 3, 4, na 5 nwere ike ịka mma. Ma ị ga- –AGH – – gafee usoro nke iwere m tupu ị nwee ike see stride ị chọrọ. Njikere, ọkụ, ebumnuche. Ma na, na-achọ ugboro ugboro.
A Ezigbo John Letter gaara Nice, Google!
Email nwụrụ anwụ? Ekwula ihe ahụ Jenni & Janneane kwuru
Uhie Bit Blue
Ọkt 27, 2010 na 9:57 AM
M hụrụ aghụghọ si Jeb n'anya! Dị ka onye nrụpụta ngwanrọ, enwere m ike ịhụ na nke a bụ ụzọ dị mma iji kwụọ ndị ahịa chọrọ iwu ngwaahịa sọftụwia ọhụrụ: ha emego mbụ?
Anọ m na freelancing maka mmekọrịta ogologo oge. Ọ bụ ya mere m ji achọ ịrụ ọrụ na weebụ, ngwanrọ na-agbanwe ma na-akawanye mma. Sọftụwia ahụ na - akawanye mma ka mmekọrịta mụ na ndị ahịa (mụ na ndị ahịa m) na - eto.
Ọkt 27, 2010 na 8:01 PM
"Ndi ebe nrụọrụ weebụ gị na-arụ ọrụ?" M ga-arụ ụka na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweghị a aidia nso “na-arụ ọrụ” n'ezie pụtara. Ọ bụ ya mere na anyị anọghị na azụmaahịa weebụsaịtị, anyị nọ na azụmaahịa azụmaahịa inbound. Anyị anaghị ewu weebụsaịtị maka ọtụtụ ndị ahịa… nke ahụ kachasị mma maka ndị dịka Jeb… mana ọ bụrụ na weebụsaịtị bụ ụzọ dị n'etiti olile anya na onye ahịa anyị, anyị na-ahụ na ụzọ ahụ dị larịị ma dịkwa njikere ịga!
Nov 5, 2010 na 4:46 PM
Ọ bụ eziokwu! Ihe mbụ ị chọrọ ime ga-adị njọ.
Fred Brooks, bụ́ onye dere akwụkwọ bụ́ The Mythical Man-Month, na-ekwu, sị: “Mee atụmatụ ịtụfu otu. Will ga-agbanyeghị. ”